အီဂျစ်မှ မော်စီအားဖြုတ်ချသည့် နောက်ကွယ်မှာ အစ္စရေးရှိဟု တူရကီ ဝန်ကြီးချူပ်ပြော - News @ M-Media
in နိုင်ငံတကာသတင်း — August 21, 2013
သြဂုတ်-၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၃
အီဂျစ်သမ္မတ မုဟမ္မဒ် မော်စီ ဖယ်ရှားခံရမှုနောက်ကွယ်မှာ အစ္စရေးရှိသည်ဟု တူရကီ ဝန်ကြီးချုပ် ရီစပ် တိုင်ယစ်ပ် အာဒိုဂန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မုဟမ္မဒ် မော်စီရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားဟာ တဲလ်အဗစ်(အစ္စရေး မြို့တော်)ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကို ထိခိုက်လှုပ်ခတ်မှုတွေရှိစေခဲ့ပါတယ်။
အခုလိုမှတ်ချက်ကို အာဒိုဂန်က အင်္ဂါနေ့က နိုင်ငံရုပ်သံသတင်းကနေပြောကြားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် တူရကီဝန်ကြီးချုပ်ဟာ နိုင်ငံရဲ့ စစ်အစိုးရခန့်ထားတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကို ထောက်ခံပြီး အီဂျစ်ကိုလမ်းလွဲအောင်လုပ်နေတဲ့ အခြားသော အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံတွေကို လည်း ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
အီဂျစ်နဲ့ပတ်သက် ပြီး ဘာပြောကြသလဲ? အဲ့ဒီ ဒီမိုကရေစီက ဆန္ဒမဲပုံးမဟုတ်ဘူး။ ဒီနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူတွေရှိသလဲ? အစ္စရေးရှိတယ်။ ဒီအတွက်သက်သေ အထောက် အထားတွေလည်း ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲမှာရှိတယ် ” လို့ အာဒိုဂန်က ပြောကြားပါတယ်။ ” ဒါဟာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း အတိအကျပဲ ”
အာဒိုဂန်ရဲ့ပြောကြားချက်က အစ္စရေး၊ အမေရိကန်နဲ့ ကိုင်ရိုက လက်ရှိ အစိုးရသစ်ကို အမျက်ထွက်စေခဲ့ပါတယ်။ အစ္စရေး တဲလ်အဗစ် အစိုးရကို ကန့်ကွက်ပြောတာကြောင့် သူတို့က တူရကီ ဝန်ကြီးချုပ်ကို အပြစ်တင်ကြပါတယ်။
၁၉၇၉ မှာ အန္နဝါ ဆာဒက်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ အီဂျစ်ဟာ အစ္စရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူတဲ့ ပထမဆုံးသော အာရဗ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်က ကမ္မကထပြုလုပ်တဲ့ အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ်မှာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဓိက သဘော တူညီမှုတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ် အစ္စရေးကို ဓာတ်ငွေ့ရောင်းပေးဖို့ အဓမ္မ တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ ဆာဒက် လုပ်ကြံခံရပြီးတဲ့နောက် ဟို့စ်နီး မူဘာရက် အာဏာရလာပါတယ်။ မူဘာရက်က ဆာဒက်ရဲ့ မူဝါဒတွေ အတိုင်းပဲ ဆယ်စုနှစ် သုံးခုကြာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မူဘာရက်က ၁.၇ သန်းမျှရှိတဲ့ ဂါဇာ ကမ်းမြှောင်ဒေသမှာ နေတဲ့ ပါလက်စတိုင်းတွေကို ပိတ်ဆို့ထားရာမှာ အပြည့်အဝ ထောက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကို ပိုစုတ်ပြတ်နူံချာစေခဲ့ပြီး များစွာသော အီဂျစ်နိုင်ငံသားတွေဟာ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်မှာ မူဘာရက်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အီဂျစ်တော်လှန်ရေး စတင်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ မူဘာရက် အစိုးရပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးပြီးလို့ တစ်နှစ်အကြာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် နှစ်လည်ပိုင်းမှာ အီဂျစ်နိုင်ငံသားတွေဟာ ပါလီမန်အသစ် သမ္မတ အသစ်အဖြစ်နဲ့ မုဟမ္မဒ် မော်စီကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် မတ်လမှာတော့ အီဂျစ်အောက်လွှတ်တော်က အစ္စရေးဟာ အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ နံပါတ်တစ် ရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတယ်အဆိုကို တညီတညွတ်တည်း ထောက်ခံခဲ့ပြီး အစ္စရေး သံရုံးကို မောင်းထုတ်ဖို့နဲ့ အစ္စရေးကို ဓာတ်ငွေ ထောက်ပံနေတာတွေရပ်ဆိုင်းဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာတော့ အီဂျစ် ပါလီမန် အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အောက်လွှတ်တော် (သို့) အာရေးဗီးယား အရေး ကော်မတီလူထု အစည်းအဝေးရဲ့ အစီရင်ခံစာကို ထောက်ခံ ခဲ့ကြပါတယ်။
” တော်လှန်ပြောင်းလဲထားတဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ အစိုးရဟာ အီဂျစ်နဲ့ အာရဗ်နိုင်ငံတွေရဲ့ နံပါတ်တစ် ရန်သူဖြစ်တဲ့ ဇီယွန်ဝါဒီတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ မိတ်ဆွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့ ဒီအစီရင်ခံစာက ကြေငြာထားပါတယ်။ ထပ်ပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အီဂျစ်ရန်သူအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပြီး အီဂျစ်အစိုးရကို အဲ့ဒီရန်သူနဲ့ပတ်သက် ဆက်စပ်တဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေ အားလုံးပြန် သုံးသပ်ဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
သမ္မတမော်စီ တော်လှန်ရေး အစိုးရဟာ ပါလက်စတိုင်းတွေအပေါ် တင်းကျပ်ထားမှုတွေ အမြောက်အများ ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီး ပါလက်စတိုင်း ကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှု ဟားမက်စ် အဖွဲ့နဲ့လည်း ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့တဲ့အပြင် ဆာဒက် အုပ်ချုပ်စဉ်တင်းမာတဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တဲ့ အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံတွေနဲ့လည်း ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတမော်စီ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီမှုအဖြစ်နဲ့ အစ္စရေးကို အလွန်နည်းတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ ထောက်ပံ့နေ ရတာတွေကို ပြန်စဉ်းစား ဖို့လည်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
ဂျူလိုင် ၃ ရက်ညပိုင်း ရုပ်သံသတင်းကနေ အီဂျစ် ဗိုလ်ချုပ် အဗ်ဒလ် ဖာတာ အယ်လ်စီစီ က သမ္မတမော်စီကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ဖွဲစည်းပုံရေးဆွဲမှုရုံးခေါင်းဆောင်း အက်ဒလီ မာဟ်မွဒ် မန်းဆာ ကို ယာယီ အီဂျစ်သမ္မတအဖြစ်ခန့်ထားခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးကိုလည်း ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ပါတယ်။
ဂျူလိုင် ၅ ရက်နေ့မှာ မွတ်စလင်ညီအစ်ကိုတော်များအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မုဟမ္မဒ် ဘာဒီက ယခုလို သမ္မတမော်စီကို ရုတ်တရက် ဖြုတ်ချပစ်တာဟာ ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘဲ သူ့ကို သမ္မတအဖြစ် ပြန်မအပ်မချင်း သန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေ လမ်းပေါ်မှာရှိနေမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဂျူလိုင် ၃ ရက်က စလို့ အီဂျစ်စစ်တပ်ဟာ မုဟမ္မဒ် မော်စီထောက်ခံတဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံသားတွေကို ရာနဲ့ချီလို့သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။
အင်္ဂါနေ့မှာတော့ အစိုးရသစ်က မွတ်စလင် ညီအစ်ကိုတော်များ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မုဟမ္မဒ် ဘာဒီကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ကိုင်ရို တောင်ဘက်က တိုရာ ထောင်ကိုပို့ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အရင် သမ္မတဟောင်း မူဘာရက်နဲ့ သူ့အဖွဲသားတွေကို ထိမ်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ရက်အရင်ကတော့ မူဘာရက်ရဲ့ ရှေ့နေ့တွေက သူ့ကို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းထောင်က လွှတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အီဂျစ်တရားသူကြီးတွေက မူဘာရက်ကို စွပ်စွဲချက်တစ်ချို့က ဖယ်ရှားပြီးတဲ့နောက် ထိန်းသိမ်းထားတာ ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
Tags: Egyp, Erdogan, Israel, Morsi